Abahlinzeki Bokunakekela Izingane kanye neFektri | I-China Baby Care Abakhiqizi
Amabhulukwe Wokuqeqesha Izingane
I-diaper yabantu abadala
Ibhulukwe Labadala Labadala
Ibhulukwe likaLady Napkin
Isikhwama se-Diaper esikhiphekayo
Ukunakekelwa Kwezilwane Zasekhaya
I-Besuper Love Thin Super Soft Baby amanabukeni
Ilungele ukudayiswa ngokugcwele nokusatshalaliswa. Sisebenzisa ubuchwepheshe bethu obukhethekile obunemizimba emincane, le nabukeni yakhelwe ukuba ithambe kakhulu, iphefumuleke kalula, imunce futhi ihlanzeke.
1. Ishidi eliphezulu elithambile kakhulu elifana ne-Merries
2.I-Super Absorbent Composite Core eneSumitomo SAP
3. Umklamo Wokwakheka Kwe-3-D
4. Ungqimba Lokutholwa
5.I-Ultra Breathable Back-sheet
6. Elastic Waist Band
I-Besuper Bamboo Planet Baby Inabukeni
-I-100% i-bamboo fibre ephezulu eshidi kanye neshidi langemuva
-I-biodegradability eqinisekiswe yi-OK-biobased
-Isilinganiso esinciphise kakhulu: 61% wokonakaliswa komhlaba phakathi kwezinsuku ezingama-75
-Inkampani yokuqala ukukhiqiza amanabukeni abolayo okonakala ngoqalo kusukela ngo-2013
-I-TCF engenazinkuni engenazo i-chlorin evela eFinland
-Iphephile ekusetshenzisweni kwengane, ayinayo i-latex, i-PVC, i-TBT noma ama-Antioxidants
-Isitifiketi International: FDA, ISO 9001, CE, TCF, FSC
-Ukumunca okukhulu nge-SAP engenisiwe
-I-D2W polybay ecekeceke + ibhokisi le-FSC
-Ukwakheka kobungcweti + insizakalo ye-OEM ne-ODM
I-Besuper Fantastic Colourful Baby Inabukeni
· Ishidi eliphezulu le-pearl le-3D elomile kakhulu
I-Super Absorbent Core (i-Germany SAP + i-chlorine pulp yamahhala)
· Isendlalelo se-Magic ADL sisiza umchamo ukusabalalisa ngokushesha
Ama-Aloe Liners anakekela isikhumba sakho esinozwelo sengane yakho
Ishidi eliphezulu le-spunbond eliphefumulekayo nomoya oshisayo onemibala eshisayo ongalukwanga
· Ukugoqa iteyipu
· Inkomba yokumanzi
I-Besuper Bamboo Planet Ibhulukwe Lokuqeqesha Izingane
I-Besuper Bamboo Planet Baby Pull-up Training Pants yakhelwe ngobuchwepheshe obuthuthukile, ukuqinisekisa ukuphefumula, ukuthamba, ukuncipha, induduzo nokungavuzisi.
· I-100% yokhuni lwensimbi olubunjiwe kalula nolushisayo lwangemuva
· Super absorbency
· 3D ukuvuza unogada
· Nokunwebeka okhalweni band
· Ishidi langemuva elinokuphefumula
· I-aloe liner
Besuper Bamboo Planet Eco Wet Wipes
Isikhumba sengane sibucayi. Okwenzeka esikhunjeni sengane yakho kungena emzimbeni wengane yakho. Ama-Besuper Bamboo Planet Eco Wet Wipes enziwa ngemicu yoqalo yemvelo futhi ivuseleleke ngamanzi ayi-98.5% ahlanzekile. Amandla ayo emvelo aduduza ngisho nengaphansi lezingane elibucayi kakhulu njengoba zakhelwe ngokucophelela ukuthi zibe mnene esikhunjeni sezinsana esibucayi. Ngoba zine-hypoallergenic, azicasuli isikhumba futhi ziphephile ekusetshenzisweni kwengane.
· Indwangu yethayela engeyona ephothiwe engu-100%
· Uketshezi: izikhathi 2.8
· Abukho utshwala
· 99% amanzi woqalo osula
Ibhulukwe Lokuqeqesha Izingane Elihle Kakhulu
Abasabalalisi bamanabukeni abafunwayo bomhlaba wonke bemikhiqizo yethu yamanabukeni, insizakalo yelebuli yangasese inikeziwe.
I-Besuper Fantastic Colourful Baby Training Pants yakhelwe ukusiza ukwenza inqubo yokuqeqesha potty ibushelelezi ngangokunokwenzeka. Sifuna ukwenza lolu shintsho lujabulise futhi luphephe ngamabhulukwe ethu okuqeqesha izingane.
· Ukudonsa kalula + off
Ishidi eliphezulu elenziwe nge-embossed, i-ultra soft futhi yomile, ivikela ngobumnene isikhumba somntwana esibucayi
I-Super Absorbent Core (i-Germany SAP + i-TCF uginindela wokhuni)
Inkomba yesitifiketi esishiyile & ubumanzi
Uwoyela wemvelo we-aloe vera wondla isikhumba sengane yakho ukugwema ukuqubuka kwenabukeni
Ibhande lesinqe elithambile elizungezile lidala ukulingana okunethezekile futhi livimbele ukuvuza kwangemuva
· Idizayini enhle futhi enemibala yesipredishithi enoyinki wezokuphepha wezemvelo
· Izithiyo zokuvuza ezisebenza kahle, ukuqinisekisa ukuthi umzimba ungena kahle futhi unciphise ubungozi bokuvuza
· Ubuchwepheshe bokuphefumula obukhethekile kanye nesipredishithi esingalukiwe se-Velvet ukuvimbela ukuqubuka kwenabukeni
Amanabukeni Wezingane Ezisanda Kuzalwa
Isikhumba somntwana osanda kuzalwa sibucayi kakhulu. Kulokhu, senzelwe iBasuper Air Newborn Baby Diaper ukuvikela kangcono ingane nokunciphisa ubungozi bokuqubuka kwephunga namakha.
· Elastic side pannel & Elastic okhalweni band
· Ishidi eliphezulu elishisiwe le-Super Soft elingashintshi ukugcina ingane ikhululekile
· Umnyombo omkhulu we-absorbency nge-Sumitomo SAP ukukhiya uketshezi ngokushesha
· Ishidi langemuva Lokuphefumula Kakhulu
I-Besuper Mother Choice Baby Inabukeni
Siyazi ukuthi yonke into oyifaka enganeni yakho ibalulekile, kakhulu. Isifiso sokugcina izingane zingavezwa amakhemikhali anobuthi yisisusa sethu esiyinhloko sokukhiqiza i-100% yamanabukeni aphephile. I-Besuper Mother Choice Baby Diapers yenzelwe ukunakekela kakhulu nothando lwengane.
Umoya oshisayo we-ADL engalukiwe (Isendlalelo Sokusabalalisa Ukutholwa)
· Super absorbency nge Germany BASF SAP
· I-Weyerhaeuser Fluff Pulp (e-USA)
· Ishidi langemuva eliphefumulekayo
IVelona Cuddles Baby Inabukeni
IVelona Cuddles wumkhiqizo ohamba phambili wenabukeni laseSri Lanka onemikhiqizo enobungane yezingane engenawo amakhemikhali anokhahlo. UBaron ube ngumhlinzeki onokwethenjelwa weVelona Cuddles iminyaka eminingi. Asigcini ngokusiza umkhiqizo ngentuthuko nokukhiqiza, kepha futhi sinikeza ngensizakalo yokwakha yokupakisha ukusizaIVelona Cuddles iqala phansi.
· 100% i-chlorine yamahhala ne-hypoallergenic.
· Ama-arcs aphindwe kabili egolide avimbela imilenze emise okwe-O.
· Isibonisi esimanzi sishintsha umbala uma simanzi, ngakho-ke mummy uhlale wazi ukuthi uzowashintsha nini amanabukeni.
· I-backsheet ephefumulelwa nge-Ultra ivumela umoya omusha ukuthi uzungeze ezansi kwengane futhi uhlale womile ngaso sonke isikhathi.
I-Super absorbent Core inobuchwepheshe obukhethekile bokukhiya amanzi obenza ukuthi umhlaba womile ngokushesha.
Ama-aloe liners wemvelo ondla isikhumba somntwana futhi asigcine sithambile futhi sibushelelezi.
· Ukunwebeka kwendlebe kathathu kunika inkululeko enkulu ezinganeni.
Ibhande le-elastic okhalweni lihlinzeka ngokulingene nokukhululeka.
· Amateyipu omlingo avumela amanabukeni ukuvuselelwa kaningi.
Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe
Inabukeni Baby, Inabukeni alahlwayo, Ikhwalithi ephezulu ye-Eco, Inabukeni Elisanda Kuzalwa, Izingane Zisula Isikhumba Esibucayi, I-Super Absorbency Adult Inabukeni,
Ikhwalithi ephezulu ye-Eco, Izingane Zisula Isikhumba Esibucayi, I-Super Absorbency Adult Inabukeni, Inabukeni Elisanda Kuzalwa, Inabukeni Baby, Inabukeni alahlwayo,